The Rohingya News Bank : Arakan Association (Singapore)
Showing posts with label Arakan Association (Singapore). Show all posts
Ko Tin Hlaing Oo from Arakan Association (Singapore) arrives at Yangon International Airport after being deported from Singapore on July 10 along with three others over alleged links to the Arakan Army. (Thuya Zaw | Frontier)
Labels: 2019, AA, Arakan Association (Singapore), en, Fundrasing, Held, Major-General Tun Myat Naing, News, Rakhine, Singapore
Labels: 2019, AA, Arakan Association (Singapore), Arrested, en, News, The Irrawaddy
ရခိုင်အသင်း (စင်္ကာပူ) ခေါင်းဆောင်များ ရှောင်တခင် ဖမ်းဆီးခံရ
ဇူလိုင် ၁၀၊ စစ်တွေ
ကိုအောင်မြတ်ကျော် (AA စစ်ဦးစီးချုပ်၏ ညီတော်စပ်သူ)အား တွေ့ရစဉ်။ (Photo - Aung Mrat Kyaw Facebook)
ဇူလိုင်လ ၉ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းက စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ရခိုင်အသင်း(စင်္ကာပူ) Arakan Association (Singapore) ၏ ခေါင်းဆောင်များ သူတို့၏နေအိမ်အသီးသီးတွင် ဖမ်းဆီးခံရသည်။
အဆိုပါ အသင်းခေါင်းဆောင်များကို စင်္ကာပူ CID ၊ လဝကနှင့် ရဲများက ၄င်းတို့၏ နေအိမ်အသီးသီးကို ရှောင်တခင် ဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
Labels: 2019, Arakan Association (Singapore), CID, mm, စင်္ကာပူ, ဖမ်းဆီး, သတင်း